Olona manao vaovao • Vaovao momba ny dia any Seychelles • Vaovao momba ny fitsangatsanganana
Hafatra Taona Vaovao Alain St. Ange ho an'ny Seychelles Iray
Desambra 29, 2019
Home » Lahatsoratra » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Hafatra Taona Vaovao Alain St. Ange ho an'ny Seychelles Iray
Ny minisitry ny fizahantany any Seychelles teo aloha Alain St. Ange dia mety ho olona handrafitra ny hoavin'i Seychelles. St.Ange dia filohan'ny One Seychelles, antoko politika vao hita tao amin'ny Repoblika Island.
St. Ange dia manana ity hafatra ity mba zaraina amin'ny People of Seychelles:
Rehefa manakaiky ny taona 2019 dia tsy azo odian-tsy hita ireo fahasarotana nateraky ny taona sy i Seychellois. Tao amin'ny dian'ny fampielezan-kevitro dia nahita fijaliana be aho izay hanokatra ny mason'ny maro amin'ny tsy fitoviana misy eo amin'ny manana sy ny tsy manan-katao ao Seychelles, ao anatin'izany ny renim-pianakaviana iray sahirana mizara sombin-kazo sardinina tranainy amin'ny zanany. Rehefa mitohy ny fitarihana ny saga eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka ary manjaka ny isa isa, ity vehivavy mahantra ity dia manohy manantitrantitra ny famahanana ny zanany, ary ny filan'izy ireo dia tsy voavaly. Betsaka ny zavatra azo atao ho an'ny fianakaviana toa an'io, betsaka lavitra noho izany ny trosa aminy.
Ity taona vaovao ity dia mitondra vahana ho antsika hanomezana tanjona vaovao havaozina an'i Seychelles, ary tena fanovana.
Amin'ny maha filohan'ny antoko One Seychelles ahy dia tena tiako ny maneho fisaorana feno ho an'ireo mpikambana ao amin'ny antoko, mpanohana ary koa ny olom-pirenenan'ity firenena mahafinaritra ity izay miasa am-pahavitrihana ho amin'ny ho avy mamiratra kokoa ho an'ny zanakay sy ny zafikelinay. Tiako ny misaotra anareo rehetra noho ny fanohananareo, fanoloran-tena manentana, fikirizana, finiavana ary fanoloran-tena.
Na eo aza ny fanamby maro ateraky ny hery fahatelo izay sahy mijoro manohitra antoko roa nahazo famatsiam-bola, dia haharitra amin'ny ady atao Seychelles ho Seychelles tokana ilaintsika.
Andao haka fotoana iray hisaintsainana ny fanjakan'ny firenentsika, ny toetry ny rafitry ny fahasalamana sy ny fanabeazana antsika, ny lalàna sy ny filaminana, ireo sehatra ara-toekarena isan-karazany ary koa ireo fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra ankehitriny. Mety ve izany fanapahan-kevitra izany ho an'ny mponina any Seychelles? Mamorona ny ho avy ilaintsika mafy ve isika? Mbola te hiaina amin'ny fanantenana sy fampanantenan-diso ve isika?
Ho an'ireo izay sosotra ary manana ampy amin'ny fiandrasana fanampiana amin'ny trano, ho an'ny ray aman-dreny tokan-tena mitady fanampiana ary nolavina, ho an'ireo izay mahazo vola ambanin'ny faritry ny fahantrana voalaza ary ho an'ireo izay mitady hivelomana raha misy kosa mahazo tombontsoa. avy amin'ireo loharanom-bolam-panjakana mitovy amin'ny karama lehibe, izany ve no tadiavinao mandritra ny taona ho avy?
Ny olom-pirenena tsirairay amin'ity firenena ity dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny Firenena. Mendrika ny hanana toerana sahaza antsika eo afovoan'ny fampandrosoana ny firenena sy ny drafitra ho avy.
Miaraka isika, Seychelles Iray isika ary i Seychelles dia mila antsika tsirairay avy hamerina ny firaisan-kina, ny fanambinana ary ny firindrana ao anatin'ny vondrom-piarahamoniny.
Ilaina ny fanamafisana ny lalàna sy ny filaminana, ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ho an'ny olonay sy ny mpitsidika ny morontsiraka. Fotoana izao handraisana fepetra hanarahana ara-dalàna ny marijuana fanafody, hiantohana ny fitsarana tsy mety lavorary sy tena mahaleo tena amin'ny fananganana azy ireo hanana fahaleovan-tena ara-bola, hanamafisana ireo mpiasa Seychellois amin'ny alàlan'ny famaranana ny fikarakarana manokana ireo mpiasa vahiny amin'izy ireo, hampitsaharana ireo ampihimamba izay manimba ny mpandraharaha ho avy , ary mifanakaloza hevitra momba ny olana ara-tsosialy izay tena misy fiatraikany amin'ny fiarahamonintsika ary miteraka fiatraikany ratsy eo amin'ny toekarentsika.
Tonga ny fotoana hitsaharan'ny resaka sy ady hevitra ary hanombohana ny fandraisana andraikitra tena izy hiatrehana ireo olana ireo sy hiarovana ny toekarentsika. Amin'ny anaran'ny antoko One Seychelles, tiako hamafisina fa hiezaka hatrany izahay hitondra ny fanovana ilainay ary efa ela ny vahoaka no nangataka.
Mangataka amin'ireo rehetra izay te-hahita ny fanalefahana ny fahantrana ho lasa zava-misy, fanambinana, fandriam-pahalemana, fihenan'ny vidim-piainana, fanabeazana maoderina sy rafi-pahasalamana, drafitra asa voafaritra momba ny fomba hiatrehana ny olana ara-tsosialy misy fiatraikany amin'ny vondrom-piarahamonintsika, hiaraka aminay ary andao isika hanao ireo tanjona ireo ho tena izy.
Mivavaka aho fa ity vanim-potoanan'ny fety ity dia fotoana iray hisaintsainantsika sy hanapahantsika fanapahan-kevitra tsara ho an'ny olona, ​​ny zanatsika, ny zokiolona mitolona, ​​ny tanora tsy an'asa, ny mpiasa tsy dia ankafizintsika ary ny taranaka ho avy.
Ho anao izay mijaly dia mivavaka aho mba tsy hahafoana fanantenana. Mivavaka aho mba homena anao herim-po, tanjaka ary fikirizana hahita anao mandritra ny taona ho avy, izay mampanantena hetra ampitomboina sy vidim-piainana avo kokoa.
Maniry ny mpikambana sy mpanohana antsika rehetra ary koa ny mponin'i Seychelles ho taom-baovao sambatra sy miroborobo. Avelao ho taona fanovana io.